3BR Pool Private Family Villa e Seminyak
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMeilani
Zonke ziyimfihlo kuwe kuphela; Ichibi labucala, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi, akukho mntu uza kubelana ngevilla. Ifumaneka nje malunga ne-1.2 mi ukusuka eSeminyak Beach, iSeminyak Square kunye neKlabhu yasePotato Head Beach.
Iireyithi sele ziquka:
-Inkonzo yogcino lwezindlu yemihla ngemihla
- I-Wi-fi yasimahla
- Amanzi eZimbiwa aThotywayo
- Umnxeba wasimahla wendawo
Qaphela: IINTLAWULO EYONGEZELELWEYO NGEBUSUKU NGE-IDR 75.000/NGE PAX
Ezi Villas zeZindlu zokulala eziNtathu zolunye ukhetho lokuhlala losapho okanye iqela labahlobo. IVilla nganye inomgangatho omkhulu weplanga oneendonga ezivulekileyo zegumbi lokuhlala kunye nophahla oluphezulu lwengca. Izihlalo ezitofotofo ezijonge kwiqula lokuqubha kunye neendawo zokuhlala elangeni ezingqongwe sisitiya esichumileyo. Lonwabela ixesha lakho lokuzonwabisa kunye nosapho okanye nabahlobo kwi-villa yakho yabucala enamagumbi okulala amathathu.
Ubungakanani begumbi: 150-250 Sqm | Ubukhulu bendawo yokuhlala : abantu abadala aba-6 + umntu o-1 owongezelelweyo
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-34 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Indawo yokuhlala ekhuselekileyo nezolileyo, ivenkile enkulu ekufutshane, kunye nezinye iivenkile ezikule ndawo. I-Double Six Beach Seminyak kwimizuzu eli-10 yokuqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Meilani
Asihlali kwivilla, ke uya kudibana kuphela nomphathi wepropathi kunye nabasebenzi ngexesha lokuhlala kwakho. Rhoqo kusasa abasebenzi bethu bevilla baya kuyicoca ivilla - bahlambe izitya, kwaye bajonge ukuba yonke into isebenza kakuhle kuwe. Nangona kunjalo, sonke sihlala kufutshane ne-villa kwaye sihlala sifikeleleka ngokulula nangaliphi na ixesha ngefowuni. Ungaqhagamshelana nathi ngokulula nangaliphi na ixesha.
Asihlali kwivilla, ke uya kudibana kuphela nomphathi wepropathi kunye nabasebenzi ngexesha lokuhlala kwakho. Rhoqo kusasa abasebenzi bethu bevilla baya kuyicoca ivilla - bahlambe i…
Iilwimi: العربية, English, Bahasa Indonesia
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Kuta Utara